चित्रबहादुर केसी भन्छन् – नौनी घ्यूको रोटी चाहिन्छ भनेर ओलीले लिँडे ढिपी गर्न मिल्दैन « Sansar News
चित्रबहादुर केसी भन्छन् – नौनी घ्यूको रोटी चाहिन्छ भनेर ओलीले लिँडे ढिपी गर्न मिल्दैन
१५ आश्विन २०७८, शुक्रबार १३:३३
प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेले अवरोध गर्दा संसद त चल्न सकेन तर, सरकार कसको अवरोधले गतिशील हुन सकेन ? झण्डै तीन महिना पुग्न लाग्दा पनि सरकारले किन पूर्णंता पाउन सकेन ? गठबन्धन सरकार कहाँ अलमल परिरहेको छ ? के सत्तारुढ गठबन्धन सरकार सञ्चालनमा असफल भएकै हो ? जनजनमा व्यापक रुपमा देखिएका केहि प्रश्न हामीले सत्तारुढ गठबन्धनको एक दल राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीलाई राखेका छौं । सत्ता सञ्चालनमा देखिएको समस्या र राष्ट्रिय जनमोर्चाको आन्तरिक राजनीतिबारे संसार न्यूजका सन्देश अर्यालले अध्यक्ष केसीसँग गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश :
झण्डै तीन महिना पुग्न लाग्दा पनि मन्त्रिपरिषद्ले पूर्णंता पाउन सकेको छैन् । यो अन्यौंल किन ?
नेपाली राजनीतिको प्रवृत्ति सबैलाई थाहा छ । यहि प्रवृत्ति अन्त्यको निम्ति नेपाली जनताले २० औं वर्षदेखि लडाईँ लड्दै आएका छन् । गएको चुनावमा नेपाली जनताले एउटै पार्टी नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)लाई बहुमत झण्डै दुई तिहाई बहुमत दिएर जिताएका थिए । उनीहरुले ५ वर्षसम्म यहि सरकारले निरन्तरता पाउनुपर्ने पनि बताएका थिए । तर, त्यसको दुरुपयोग ओली जीले नराम्रोसँग गर्नुभयो । उहाँले संसद देख्नै चाहनुभएन । भत्काएको भत्काई गर्नुभयो । उहाँका कदमविरुद्व पाँच दल एक भएका हुन् । उनीहरुको एकताबाटै संसद पुनस्र्थापना भएको हो । र त्यसले ओलीको प्रतिगमनकारी कदमलाई पनि परास्त गरिएको हो ।
तर, कदमलाई परास्त गरेपनि संसद पुनस्थापना भएपनि वैधानिक रुपमा सरकार बहुमत अवस्थामा थिएन । माधव र झलनाथ जीहरुको अवस्था समस्यापूर्णं थियो । उहाँहरुकै विषयलाई निकास दिनेगरि अध्यादेश ल्याइएको हो । अध्यादेशबाट मुलुक चलाउने विषय राम्रो त होइन् तर, त्यो बाध्यतापूर्णं थियो । ओलीको अध्यादेश र गठबन्धन सरकारले ल्याएको अध्यादेश एउटै थिएन । तर, त्यहि अध्यादेश फेरि गलपासो पनि बनेको विषय सहि हो ।
नेपाली राजनीतिको वास्तविकता सबैलाई थाहा छ । अध्यादेशमा राखिएको व्यवस्था (२० प्रतिशतबाट पार्टी फुटाउन मिल्ने)लाई आधार मानेर मन्त्रीमा जानेको लर्को देखियो । नभए पार्टी नै फुटाउनेसम्मका षडयन्त्र हुन थाले । अहिले अध्यादेशलाई फिर्ता लिनुको कारण पनि त्यहि हो । अध्यादेशकै कारण सरकार अहिलेसम्म अल्झिएको हो ।
अहिले माधव र उपेन्द्र जीहरुलाई सरकारमा जाने तर महन्थको हालत भयो भने के हुन्छ ? त्रास पनि छ । यसअघि जस्तै अदालतमा मुद्दा छ । त्यो किनारा लागेको छैन् । फेरि पुनरावृत्ति हुन्न भन्ने निश्चित छैन् । त्यसकारण त्यहि हविगत नहोस् भन्नका लागि पनि मन्त्रिपरिषद् विस्तार नभएको हो ।
तर, अध्यादेश फिर्ता पछि पनि सरकारले त पूर्णंता पाएन । किन ?
तपाईँले नेपाली राजनीतिलाई बुझ्नुभएकै छ । राजनीतिमा देखिएको त्यो घिनलाग्दो रोग यी चारै दलमा पनि छ । ‘गोठ बस्ने गोठालो दाई खै मलाई कुराउनी, एउटा छैनौ, दुईटा छैनौ कतिलाई पुराउनी ?’ मन्त्रीको संख्या २५ हो तर, ७५ जना मन्त्री बन्न तयार भएर बसेका छन् । मन्त्री बन्नेको तछाडमछाडको कुरा प्रचण्ड जीले त सार्वजनिक नै गर्नुभयो नि । के पार्टीभित्रका सबैलाई मन्त्री पुर्‍याउने स्थिति छ ? अहिले त २५ भन्दा बढिलाई मन्त्री बनाउन मिल्दैन् नि । त्यसकारण समस्या नेपाली राजनीतिको मुल प्रवृत्ति हो । अप्रजातान्त्रिक स्वार्थी प्रवृत्तिले पार्टीहरुलाई समस्या परेको छ ।
अहिले माधव र उपेन्द्र जीहरुलाई सरकारमा जाने तर महन्थको हालत भयो भने के हुन्छ ? त्रास पनि छ । यसअघि जस्तै अदालतमा मुद्दा छ । त्यो किनारा लागेको छैन् । फेरि पुनरावृत्ति हुन्न भन्ने निश्चित छैन् । त्यसकारण त्यहि हविगत नहोस् भन्नका लागि पनि मन्त्रिपरिषद् विस्तार नभएको हो । मैंले सबै बुझेर गठबन्धनकाे शुरुकै बैठकमा भनेको थिएँ, ‘कमसेकम कांग्रेस र माओवादीले आफ्ना मन्त्री राखुन् । कम्तिमा पनि महत्वपूर्णं मन्त्रालय नेतृत्व बिहिन नहोस् ।’ तर उहाँहरुले बुझ्नुभएन । अहिले हविगत के छ सबैले देखेकै छ ।
मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा ‘मालदार मन्त्रालयको खोजी’ पनि अवरोधक बनेको भन्ने छ । के हो विषय ?
हो तपाईँले भनेजस्तै कतिपय विषय यहाँ पनि अड्कीएको छ । यहाँ सबैलाई मालदार मन्त्रालय चाहिएको छ । मालदार मन्त्रालय कांग्रेस र माओवादीले लिइहाले अब पछि जानेलाई मालदार छैन् । त्यसले पनि असन्तुष्टी बनाएकै छ । एक पटक मन्त्री भईसकेको मान्छे फेरि तल्लो माल नभएकोमा जान भएन । त्यो पनि व्यवस्थापनको विषय छ ।
अहिले कतिपय शक्तिले राजा ल्याउन खोजेका छन् । गणतन्त्र असफल पार्न खोजेका छन् । नेपाललाई फेरि हिन्दु राष्ट्र बनाउन खोजेका छन् । ०७२ को संविधानलाई च्यातचुत पार्न खोजेका छन् । त्यहि खेल भईरहेको छ । अहिलेको विकल्प ओली ल्याउने कदापी हुनसक्दैन् ।
तीन महिनालाई आधार मानेर सरकार कसरी जान्छ भन्ने मुल्यांकन गरिन्छ । सरकारले तीन महिनामा यसो गर्यौं भनेर नतिजा पनि दिन्छ । तर, अहिले अवस्था त निकै अन्यौंल छ । कतिपय गठबन्धन सरकार असफल भईसक्यो, अब विकल्प तिर जानुपर्छ पनि भन्दैछन् । तपाईँले कसरी बुझ्नुभएको छ ?
अहिलेको अवस्था प्रतिगमन तर्फ मुलुकलाई जसरी पनि लैजान खोज्ने जुन खेल भयो त्यसको परिणाम हो । जुनसुकै मुल्य चुकाएर भएपनि सत्तामा जानुपर्छ, शक्तिमा जानुपर्छ भन्ने सोंचको पनि परिणाम हो । तथापी ७९/८० दिनलाई हेरेर मात्रै सरकार असफल नै भयो भन्न मिल्दैन् । यसको विकल्प खोज्न मिल्दैन् ।
के चुनाव चाहिँ विकल्प होला त ?
यो सरकार बाँकी अवधिको लागि हो । गठबन्धन सरकारले नै चुनाव गराउने हो तर, तोकिएको समय । अहिले चुनाव गर्ने बेला भईसकेको छैन् ।
तपाईँले सबै नेतालाई चिन्नुभएकै छ । देउवा, प्रचण्ड, ओली र माधवलाई नजिकबाट व्यहोरिरहनु भएको छ । अहिलेको अवस्थालाई हेर्दा कसको के आशय पाउनुहुन्छ ?
ओलीले संसद देख्नै नचाहने । त्यो भत्याएको भत्काई गर्न पर्ने । जसरी पनि देशलाई चुनावमै लैजाने जुन खालको षडयन्त्र गरिएको थियो त्यसलाई देउवा र प्रचण्डले असफल बनाइदिए । यिनीहरु मिलेर समयमै सरकार बनाउनु सक्नु पर्थ्याे त्यसमा यिनीहरु सफल भएका छैनन् । ढिलो चाँडो यो सरकार चुनावी नै हो ।
म व्यक्तिगत रुपमा देउवा वा प्रचण्डको टिका टिप्पणी गर्न चाहन्न । उहाँहरुको राजनीति र इतिहास सबैले चिनेकै अवस्था छ । हलेदो भनेपछि कोट्याइरहन पर्छ भन्ने छैन् । ओलीले संसद देख्नै नचाहने । त्यो भत्याएको भत्काई गर्न पर्ने । जसरी पनि देशलाई चुनावमै लैजाने जुन खालको षडयन्त्र गरिएको थियो त्यसलाई देउवा र प्रचण्डले असफल बनाइदिए । यिनीहरु मिलेर समयमै सरकार बनाउनु सक्नु पर्थ्याे त्यसमा यिनीहरु सफल भएका छैनन् । ढिलो चाँडो यो सरकार चुनावी नै हो ।
अहिले संसद चल्न सकेको छैन् । एमालेबाट गरिएको अवरोधको निकास कसरी खोज्ने त ?
तीन वर्षसम्म सत्तामा रजाईँ गरेका ओलीलाई सत्ताबाट च्यूत हुन पर्दा निकै ठूलो चोट परेको छ । सत्ता र शक्तिको लागि जे पनि गर्न तयार हुने ओलीले अहिले संसदमा हुलदंगा मच्चाईरहनु भएको छ ।
सत्ताको दुरुपयोग गरि ओलीले राष्ट्रपति जस्तो संस्थालाई समेत धुलिसात पार्नुभएको थियो । उहाँले राष्ट्रपतिलाई कठपुतलीजस्तो बनाउन खोजेपछि मात्रै ५ दल अदालतमा गुहार माग्न गएको हो । ओली जी अहिले परमादेश सरकार भन्दै गाली गर्दै हिँड्नुभएको छ । उहाँले संविधानमै नभएको कुरामा टेकेर पटकै विच्छे संसद विघटन गर्नुभयो । अहिले लाज पचाएर उहाँले परमादेश भन्दै गाली गर्नुभएको छ । लाग्दैछ उहाँको काम नै गाली गर्ने बाहेक केहि छैन् । अहिले माधव र झलनाथलाई भट्टे सराप गर्नु, सत्तो सराप गर्नुबाहेक ओलीको अर्को काम देखिन्न । उहाँको स्तर छर्लङ्ग भएको छ ।
यसपालि मात्रै होइन ०५७ सालमा ५७ दिनसम्म लाउडा काण्डको नाममा संसदमा अवरोध भएकै थियो । संसदीय व्यवस्थामा केहि जानेका टाठा बाठाले आफ्नो दुनो सुझ्याउने हो के रे । अहिले संसदीय व्यवस्थालाई असफल पार्नका लागि देशी विदेशी शक्तिहरु लागिरहेकै छन् । त्यसमा मतियार एमाले जस्ता पार्टीहरु भएका छन् ।
ओली जी अहिले परमादेश सरकार भन्दै गाली गर्दै हिँड्नुभएको छ । उहाँले संविधानमै नभएको कुरामा टेकेर पटकै विच्छे संसद विघटन गर्नुभयो । अहिले लाज पचाएर उहाँले परमादेश भन्दै गाली गर्नुभएको छ । लाग्दैछ उहाँको काम नै गाली गर्ने बाहेक केहि छैन् । अहिले माधव र झलनाथलाई भट्टे सराप गर्नु, सत्तो सराप गर्नुबाहेक ओलीको अर्को काम देखिन्न । उहाँको स्तर छर्लङ्ग भएको छ ।
तपाईँले भनेकै अवस्थामा संसद कसरी चलाउने ?
संसद चलाउन पर्छ । यसको विकल्प छैन् । ओलीले लिँडे ढिपी गरेर हुन्न । मलाई नौनी घ्यूको रोटी बनाईदिनुपर्छ, हात्ती बनाईदिनुपर्छ, त्यो हात्ती सानो थैलीमा राखिदिनुपर्छ भनेर हुँदैन् । त्यस्ता कामले आफ्नै बदनाम हुन्छ । अहिले ओलीको हुनेसम्म बदनाम भएको छ । दिनमै ३ सय बाटाको उद्घाटन गर्न पर्ने भूत अझै निस्किएको छैन् । भइरहेका बाटाको हविगत हेर्नु छैन् खाली उद्घाटन मात्रै । उहाँको बदनाम त त्यहिँबाट सुरु भएको होइन् ?
आफैंले पार्टीभित्र किचकिच गर्नभन्दा अर्को पार्टी बनाए म बाटो खोलिदिन्छु भन्ने ओलीले अहिले अध्यादेश ल्याएर निस्किए भनेर किन रुनु पर्‍यो । योभन्दा लोक लाज के हुन्छ ? आफैंले बेला–बेला अदालतमा विचाराधिन विषयमा संसदमा बोल्न हुन्न पनि भन्ने अनि आफैंले त्यहि विषय उचाल्ने कुरा कत्तिको न्यायोचित हुन्छ ? आफुँ सत्तामा रहन नपाएपछि देशै खरानी हुन्छ भने पनि होस् भन्ने सोंचबाट ओली मुक्त हुनुपर्छ ।
फरक प्रसङ्गमा, नेकपा (मसाल)भित्र पछिल्लो निकै ठूलो असन्तुष्टी देखिन्छ । कतिपय नेताहरुले पार्टी नै परित्याग गरेको अवस्था पनि छ । पारिवारिक विर्ता जस्तो बन्यो भन्ने टिप्पणी छ । यसलाई के भन्नुहुन्छ ?
देशभरिकै पार्टीहरुमा आन्तरिक समस्या हुँदा राष्ट्रिय जनमोर्चा अछुतो रहने कुरा भएन । हाम्रा पार्टीभित्र पनि कोही पद नपाएकाहरु, अवसर नपाएकाहरु छटपटाएर हिँडेका छन् । पार्टी विरोधी गतिविधि गरेर हिँडेका छन् । एक/दुई जना मिलेर समानान्तर राष्ट्रिय जनमोर्चा खोल्न पाइन्छ ? सुदूरपश्चिम प्रदेशमा एउटा सल्लाहकार र एउटा केन्द्रीय सदस्य मिलेर खास राष्ट्रिय जनमोर्चा हामी हौं भनेर हल्ला गरे । गण्डकी प्रदेशमा पनि एउटा सांसदले त्यस्तै गरे । पार्टीभित्र बसेपछि, पार्टीको नियम मान्नुपर्छ, नियम नमाने कारबाही हुन्छ । यो संसारभरिको नियम हो ।
अर्को कुरा, कर्णाली बचाउ अभियानका भरत शाही हिजो ओलीले प्रतिगमन गर्‍यो भन्दै ठाउँ-ठाउँमा प्रदर्शन गर्दै हिँड्ने उनी अहिले प्रतिगमनकारी पार्टीमा सामेल भए । त्यसलाई के महत्व दिने ? उनको स्वार्थलाई लिएर जनमोर्चाका बारेमा टिप्पणी गर्न आवश्यक छैन् ।
संसद चलाउन पर्छ । यसको विकल्प छैन् । ओलीले लिँडे ढिपी गरेर हुन्न । मलाई नौनी घ्यूको रोटी बनाईदिनुपर्छ, हात्ती बनाईदिनुपर्छ, त्यो हात्ती सानो थैलीमा राखिदिनुपर्छ भनेर हुँदैन् । त्यस्ता कामले आफ्नै बदनाम हुन्छ । अहिले ओलीको हुनेसम्म बदनाम भएको छ । दिनमै ३ सय बाटाको उद्घाटन गर्न पर्ने भूत अझै निस्किएको छैन् ।
राष्ट्रिय जनमोर्चालाई सामान्य मान्छेहरुले निकै इमान्दारहरुको पार्टी भनेर बुझ्छन् । तर, संसदीय प्रक्रियामा आउँदा सबैभन्दा घिनलाग्दो गरि जनमोर्चा देखियो । यसलाई के गरि बुझ्ने ?
राष्ट्रिय जनमोर्चा सबैभन्दा बढि बिग्रियो भनेर भन्नु सरासर अन्याय हुन्छ । अन्य संसदीय दललाई हेर्नुस् कति बिग्रेका छन् । तिनिहरुमा सांसद खरिद–बिक्रिको घटना कति खुलेआम छ । ५० को दशकदेखि नै कांग्रेस र एमालेमा निकै नैसांसदहरु खरिद–बिक्रिको घटनाहरु देखिएका छन् । तपाईँले गण्डकी प्रदेशको घटनालाई जोड्न लाग्नु भएको होला । त्यहाँ ह्विप नमान्नेलाई हामीले सिधै कारबाही ग¥यौं । यसैलाई आधार मानेर राष्ट्रिय जनमोर्चा खत्तम भन्न मिल्दैन् ।
हामी रणनीतिक रुपले संसदीय व्यवस्थाको पक्षपती होइनौं । हामी तत्कालका लागि गणतन्त्रको संरक्षण हुनुपर्छ, दलीय व्यवस्थालाई जोगाउन पर्छ, संघीयता खारेज गर्नुपर्छ भनेर लागिरहेका छौं । अहिले राष्ट्रियताको प्रश्न गम्भीर बनेर आएको छ । यसमा राष्ट्रिय जनमोर्चा निकै सजग छ । हामी राष्ट्रियताको विषय अन्यभन्दा हामी स्पष्ट छौं ।
तपाईँहरुको आन्तरिक राजनीतिको विषयमैं धेरै टिप्पणीहरु हुन्छन् । पार्टी नै श्रीमान्, श्रीमति अनि परिवारकै पेवाजस्तो भयो भन्ने आरोप छन् । यसलाई के बुझ्ने ?
श्रीमानले राजनीति गरेपछि श्रीमतिले राजनीति गर्न पाइन्न ? मोहनविक्रमसँग बिहा हुनुभन्दा पहिल्यै उहाँले राजनीतिक आन्दोलनमा लड्दै आएको होइन् ? मान्छे सैद्धान्तिक र राजनीतिक रुपले सकिएपछि यस खालका टिप्पणी गर्छन् । यस्तोमा मलाई टिप्पणी गर्न लाज लाग्छ । मोहन विक्रम र म पनि ज्वाईँ सरुवा पर्छौं । के मेरो र मोहन जीको फरक–फरक इतिहास छैन् । यस्ता बेतुकका टिप्पणी गर्ने ? म केहि नगरी यत्तिकै पुगेको होइन् ।
यो गलत आरोप हो । दुर्गा जी र मोहन विक्रम जीलाई जोडेर बनाइएको होला त्यो निकै गलत छ । दुर्गा जीलाई मोहन जीसँग मात्रै जोडेर हेर्नु निकै नै अन्याय हुन्छ । दुर्गा जी अहिले मात्रै होइन् ०५६ सालमा कपिलवस्तु, ०६४ मा काठमाडौंबाट पनि चुनावमा उठ्नुभएको थियो । तत्कालिन समय उहाँ हार्दा कसैले कुरा उठाएन र अहिले प्यूठानबाट जित्दा धेरैले खेदो खने । यो जस्तो पाखण्डी के हुन्छ ?
मोहन विक्रम जी पनि अनि तपाईँ पनि उमेरले निकै बुढ्यौली अवस्थामा हुनुहुन्छ । तर, पार्टीमा तपाईँहरु पछिको विकल्प को हो भनेर भेटाउने अवस्था छैन् । तपाईँहरुले दोस्रो तहको नेता तयार पार्न किन चाहनुभएन ?
यो प्रश्नमा गलत बुझाई छ । होचिमिनले कति वर्ष नेतृत्व गरे, नेहरुले कति वर्ष नेतृत्व गरे, माओ, स्टालिन, लेनिनका इतिहास बिर्सन मिल्छ ? के बाउ बाजेले अंशमा दिएको विषय हो र नेतृत्व ? नेतृत्व गर्ने भनेको फरक विषय हो । नेतृत्वको चयन हुने प्रक्रिया आफ्नै हुन्छ । पदाधिकारी कसरी बन्छ भन्ने आफ्नै नियम हुन्छ । नेतृत्व भनेको विचार हो यहाँ उमेरले फरक पार्दैन् । तन्देरी हुँदैमा नेतृत्वमा जाने भन्ने हुन्न । पार्टीभित्रको निश्चित पद्धति, प्रणाली र प्रक्रियालाई पुरा गरेर बन्ने कुरा हुन्छ । मेरै सन्दर्भमा भन्नुहुन्छ भने कुनै उपयुक्त पात्र आउँछ भने म छाड्न तयार छु । तर त्यस्तो त छैन् ।
अन्त्यमा, तपाईँले भनेअनुसार राष्ट्रिय जनमोर्चा संसदीय व्यवस्थालाई स्वीकार गर्ने पार्टी होइन्, संघीयताको पक्षपाती होइन । तर, तपाईँहरुको भूमिका यहि ‘गन्हाएको’ संसदीय व्यवस्थालाई संरक्षण गर्ने, विकास गर्ने खालको देखियो । संघीयताको विरोध गर्ने तर संघीयतालाई व्यवस्थित बनाउन पर्छ भनेर लाग्ने खालको देखियो । तपाईँहरु अलमल कि हामी बुझ्ने अलमल ?
हामी अलमल छैनौं, तपाईँहरुले नबुझेर हो । तपाईँहरुले नबुझेको कारण अन्यौंल हुन्छ ।
पुरातनवादीहरुले ०७२ को संविधान च्यातचूत पार्न खोज्छन् । यसले बहुदलीय व्यवस्थालाई पनि संसदीय व्यवस्थालाई पनि ध्वस्त पार्छ । नयाँ जनवादी क्रान्ति ल्याउन सके त यी सबैलाई ध्वस्त पार्न हुन्थ्यो तर तत्कालै आउने अवस्था छैन् । अहिलेको अवस्थामा पुरातनवादीहरुले, कतिपय विदेशी शक्तिहरुले गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षताजस्ता मुद्दालाई उल्ट्याउन चाहेका छन् ।
पुरातनवादीहरुले ०७२ को संविधान च्यातचूत पार्न खोज्छन् । यसले बहुदलीय व्यवस्थालाई पनि संसदीय व्यवस्थालाई पनि ध्वस्त पार्छ । नयाँ जनवादी क्रान्ति ल्याउन सके त यी सबैलाई ध्वस्त पार्न हुन्थ्यो तर तत्कालै आउने अवस्था छैन् । अहिलेको अवस्थामा पुरातनवादीहरुले, कतिपय विदेशी शक्तिहरुले गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षताजस्ता मुद्दालाई उल्ट्याउन चाहेका छन् । हामी संविधानका अन्तरवस्तुप्रति हाम्रो अहसमति छन् तर यसको उत्तम विकल्प अहिल्यै देखिएको छैन् । जबसम्म यो व्यवस्थालाई खत्तम पारेर अर्को उपयुक्त विकल्प नल्याउन्जेल यसलाई भत्काउन मिल्दैन् । राजा ल्याउन खोज्नेले हल्ला गरे भनेर हामी पछाडि लाग्दैनौं । अहिलेको हाम्रो प्रष्ट कार्यनीति : गणतन्त्रको रक्षा, धर्मनिरपेक्षताको रक्षा र संघीयताको खारेजी हो । यसलाई जनताको बीचमा लईरहेका छौं । हामी अलमल छैनौं ।
सांसद पार्वती विशुन्के भन्छिन् – कारबाही हामीलाई होइन्…